PETA MURGATROYD, IZICWANGCISO ZOMTSHATO EZIZAYO ZIKAMAKS CHMERKOVSKIY: EXCLUSIVE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UPeta Murgatroyd kunye noMaks Chmerkovskiy babhiyozela isikhumbuzo sokuzibandakanya: Iinkcukacha zomtshato ezizayo
UMaksim Chmerkovskiy kunye noPeta Murgatroyd babenedili lokuzibandakanya e-Diamond Horseshoe e-NYC. Ityala: UJohn Sciulli / Getty Izithombe zeCaruso eziManyeneyo
Ngu: Kelly Spears 12/07/2016 ngo-1: 00 PM
I-selfie ene-steam kunye nezithethe ezintsha! Ukudanisa ngeenkwenkwezi duo Imephu yaseMurgatroyd kwaye Ubukhulu Chmerkovskiy babhiyozele isikhumbuzo sokuqala sokuzibandakanya kwabo ngoMvulo, nge-5 kaDisemba, njengoko belindele ngolangazelelo ukufika komntwana wabo wokuqala.
UChmerkovskiy, oneminyaka engama-36 ubudala, waqhawula umfanekiso wesibini esiphuzayo emva kokutya isidlo sothando kwindawo yokutyela ephezulu eManhattan uDaniel. Enkosi @RestaurantDaniel kunye nabasebenzi bakho abangalunganga kwisikhumbuzo sethu sokuqala sokukhumbula isidlo! ubhale. @petamurgatroyd siyithande kakhulu sijonge phambili ekwenzeni isiko lethu lonyaka. #UthandoNaloLomtshana
bruno mars kunye nojessica caban
Enkosi @RestaurantDaniel kunye nabasebenzi bakho abangalunganga kwisikhumbuzo sethu sokuqala sokukhumbula isidlo! @petamurgatroyd siyithande kakhulu sijonge phambili ukuyenza le isiko lethu lonyaka #InLoveWithThisChick #NamhlanjeWasAnAmazingDay #HadToTryDesert #CardioDayTomorrow
Ifoto ethunyelwe ngu @maksimc ngo-Dec 5, 2016 ngo-8: 07 pm PST
Kwangoko ngala mini, uMurgatroyd, 30, wabelana ngesifinyezo seentaka zothando ezazingqengqa ebhedini. Kumhlobo wam osenyongweni, endiza kuchitha naye ubomi bam bonke, wandibonisa lo mfanekiso mhle. Uyinto yonke endihlala ndiyiphupha kwaye andinakulinda iminyaka engama-50 ezayo apho ndingalala ecaleni kwakho, ndithandane kwakhona. #sikhumbuzo #luvuyo #luthando #soontobethree.
Kumhlobo wam osenyongweni, endichitha naye ubomi bam bonke no .. ..Niyinto yonke endisoloko ndiyiphupha kwaye andinakulinda kule minyaka ingama-50 izayo apho ndingalala ecaleni kwakho, kwaye thandana kwakhona ❤️ #happyannivers #inlove #soontobethree
Ifoto eposwe nguPeta Murgatroyd (@petamurgatroyd) ngo-Dec 6, 2016 ngo-4: 28 ekuseni PST
UChmerkovskiy ngokungathandabuzekiyo wathumela ividiyo kwisindululo sakhe esiya eMurgatroyd emva kwe-5 kaDisemba ngo-2015. Ndivuka rhoqo kusasa ukusukela ngala mini ndonwabile kwaye ndithandana ngakumbi kunolo lokugqibela! Ubhale ecaleni kweklip yeemvakalelo. Ndabhala umyalezo emva komyalezo kwaye ndacima yonke into kuba andifumani magama okubonisa uthando lwam kuwe… Into endiyifumeneyo zizenzo zam kunye nobomi bokukwenza ube ngowona mfazi wonwabileyo! Usuku olumnandi @petamurgatroyd .
Ndavuka rhoqo ekuseni ukusukela ngala mini ndonwabile kwaye ndinothando ngakumbi kunolo lokugqibela! Ndabhala umyalezo emva komyalezo kwaye ndacima yonke into kuba andifumani magama okubonisa uthando lwam kuwe… Into endiyifumeneyo zizenzo zam kunye nobomi bokukwenza ube ngowona mfazi wonwabileyo! Happy birthday @petamurgatroyd אני של אהובי והאהוב שלי הוא שלי
Ividiyo ethunyelwe ngu @maksimc nge-5 kaDisemba ngo-2016 ngo-2: 11 pm PST
uyazi ukuba ndiyakuthanda lyrics
Ngexesha lotyelelo ku Ingcaciso Kwinyanga ephelileyo, uMurgatroyd uxoxwe kudliwanondlebe olukhethekileyo lokuba yena kunye nesoka lakhe bajolise ekuzalweni kosana lwabo, kodwa izicwangciso zomtshato wabo kaJulayi 2017 zikwizingqondo zabo. Ndiye ndaziqonda iilokhwe endizifunayo. Ngalo mhla wam kanye, ndifuna ilokhwe enkulu kakhulu… ilokhwe epheleleyo; akukho nto iphambeneyo, watyhila. Ngetheko emva koko, ngokuqinisekileyo ndifuna into emnandi, kwaye njengenguqulo yala pati.
Kunye neengubo zokutshintsha komtshato wakhe, umama oza kuba ngumfazi naye ukhethe isinxibo sakhe kwiintsuku ezingaphambi nasemva komtshato. I-duo icwangcisa umsitho weentsuku ezintathu womtshato eLong Island. Eyesine [isinxibo] sifana nelokhwe yaselwandle, kuba siyibambe elwandle, utshilo uMurgatroyd Ingcaciso .
Iiplani ze-blonde ezintle zokunxiba iinwele zakhe kwi-updo kwaye unganiki ubucwebe obuncinci ngexesha lomsitho wolwandle. Ukwanenjongo yokufumana umzimba wakhe ubume obufanelekileyo emva kosana.
Ngubani ongafuniyo ukubonakala elungile kwaye emhle ngemini yabo? uqukumbele Ingcaciso . Ndikuqhelile ukulunga kwaye ndiyasebenza, kungoko ibilutshintsho olukhulu ekufuneka ndicothise kancinci.
Indlela yokwenza i-broquie bouquets
ikhitshi elimhlophe namhlophe
ucwangco lwemidaniso emtshatweni
zingaphi izipho zokubhalisela umtshato